Maxaa Nidaamyada Isgaarsiinta Badda loo Isticmaalo Warshadaha Baddaha？ –Waxbaradka News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>News>Industry News
Maxaa Nidaamyada Isgaarsiinta Badda loo Isticmaalo Warshadaha Baddaha？
Waqtiga: 2020-07-08 Hits: 13
Isgaarsiinta Raadiyowga ee badda waxay ku jirtay isbeddel badda dhexdeeda qarnigii la soo dhaafay. Ka dib maalmihii badda iyo calanka (oo wali quseeya maanta xaaladaha qaarkood), raadiyaha wuxuu isbadal weyn ku keenay isgaarsiinta badda ee badda.
Laga soo bilaabo sannadihii hore ee qarnigii la soo dhaafay, maraakiibta waxay bilaabeen inay rakibaan raadiyaha si ay ugu gudbiyaan calaamadaha dhibta dhexdooda iyo tan xeebta. Qoraal-ku-isticmaalidda 'Morse code' waxaa loo adeegsaday qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad xiriirka isgaarsiinta badda.
Iyada oo la horumarinaayo tikniyoolajiyadda isgaarsiinta mobilada, isgaarsiinta badda ma aysan isticmaalin kaliya radiotelegraphy laakiin waxay sidoo kale isticmaashay taleefanada bilaa wireless muddo dheer. Taleefannadan bilaa-waayirka ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa xiriirada ganacsiga, si joogto ah u soo sheega jagooyinka markabka iyo taariikhda gelitaanka iyo bixitaanka, iyo iyagoo raacaya amarrada wareejinta dhulka. Badmaaxiinta baddu waxay kaloo adeegsan karaan taleefanno gacanla'aan ah si ay ugu dhawaaqaan ehelka dhulka ku nool badda fog, taasoo ka dhigaysa nolosha keli kalluunka ka sii kulul oo qosol leh.
Xiriirka nabadgelyadu marwalba wuxuu muhiim u ahaa isgaarsiinta mobilada badaha. Maraakiibta ku shiraacda badda waxay had iyo jeer wajahayaan khatarta hirarka dabaylaha, dib-u-warshadaha, dib-u-dhiska qulqulka iyo shilalka markabka. Telefoonka badda ayaa u keenaya badbaado badan shaqaalaha markabka.
Saadaasha hawada ee badda ayaa ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah wada xiriirka badda. Sababta oo ah harikeyntii baddu ay halista ugu weyn ku hayaan maraakiibta, sanadkasta aduunka, maraakiibta ayaa kudhaca duufaanta awgood. Sidaa daraadeed, wadamada xeebaha waxay sameeyeen shabakad isgaarsiineed oo badeedka maraakiibta, waxayna si joogto ah u sii daayaan xogta saadaasha hawada ee aagag kaladuwan oo badaha ah maraakiibta.
Telefoonnada badda, sida taleefannada gawaarida, waxay ku rakibtaan taleefannada gacanta maraakiibta waxayna saldhigyo saldhig ka dhigtaan xeebta si hirarka raadiyaha ay u daboolaan xeebta. Si loo kordhiyo masaafada isgaarsiinta ee markabka iyo xeebta, saldhigga saldhigga waxaa guud ahaan lagu rakibay dhul-gariirka ugu sarreeya.
Haddii badmaaxiin markabka saaran uu doonayo inuu taleefan kula hadlo qoyskiisa, taleefanka badda ayaa u gudbin doona hirarka raadiyaha saldhigga saldhiga wuxuuna u gudbin doonaa khadka jirridda xafiiska taleefanka dhulka: taleefanka guriga ayaa lagu xiri karaa khadka xafiiska taleefanka.
Maraakiibta ayaa had iyo jeer kaxaynaya xamuul badan. Markaad gasho caadooyinka wadan, cadeynta kastamka waa dhib badan waqti badana ayey qaadataa. Hadda oo aan haysanno taleefoonka badda, waxaan u sheegi karnaa liiska xamuulka, shaqaalaha iyo liistada rakaabka dusha markabku maalin maalmaha ka mid ah annaga oo sii marineyna kanaalka taleefanka gacanka badda iyo aaladda raadiyaha raadiyaha. Dabcan, tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo isgaarsiinta xogta kombiyuutarka. Markabku marku soo galo dekada, howsha oo dhan ayaa dhameystiran, taas oo waqti badan badbaadin karta.
Hore: Su'aal adag oo xitaa Apple aysan ka jawaabi karin: Dadka dhulka jooga runti ma doonayaan 5G?
Xiga: Markay Taleefoon gacmeedyadu Kula kulmaan Farshaxanka Wadada